समृद्ध नेपालको नारा, कबिल्ला राजाको कमिज र विषबृक्ष - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
समृद्ध नेपालको नारा, कबिल्ला राजाको कमिज र विषबृक्ष
१९ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०१:१४ June 2, 2019 Nonstop Khabar
कबिल्ला राजाकी छोरी थिइन् । आफ्नी एकमात्र सन्तान अत्यन्त रोगी भएका कारण राजा चिन्तित थिए । भएजति सबै उपाय लगाए, रोग बीसको उन्नाइस भएन । एक प्रख्यात ज्योतिषले राजकुमारी निको हुने सुझाउँदै राजालाई उपाय सिकाए– ‘लोभ नभएको मानिसले लगाएको थोत्रो कमिज लगाइदियो भने राजकुमारीको रोग निको हुन्छ । उनी स्वस्थ हुन्छिन् ।’
सन्तानका लागि सबै गुमाउन तयार कबिल्ला राजा यस्तो सरल उपायले हर्षविभोर भए । ज्योतिषलाई पुरष्कृत गरे । अनि लागे लोभमुक्त मानिसको खोजीमा । तर बिडम्बना जो मानिस भेटिन्थे, ती लोभबाट निरपेक्ष थिएनन् । जहाँ गए पनि दिने र लिनेमा रस्साकस्सी चल्थ्यो । उदार मानिस खोज्ने क्रममा उनी एउटा किसान बस्तीमा पुगे । हलो जोतिरहेको साधारण किसानलाई ठम्याएर राजाले आफ्नो परिचय दिंदै कमिज मागे । उ तयार भएन् । आकर्षक प्रस्ताव राखे, त्यसले पनि छोएन ।
राजा थोत्रो कमिजका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद लगाउन तयार थिए । आखिर किसानको शरीरबाट हातै हालेर कमिज हात पार्न राजा अघि बढे । किसान डराएर भाग्न थाल्यो । राजा पछ्याउँदै गए । धेरै समयको दौडधुपपछि राजाले किसानको ओढ्ने हात पारे । जब ओढ्ने तानिएर हातमा आयो, आश्चर्य राजा देख्छन् त उसको शरीरमा कमिजै पो रहेनछ ।
समृद्ध नेपालको नारा अन्ततः त्यही थोत्रो कमिज पाउन कबिल्ला राजाले गरेको निरर्थक प्रयास जस्तै बनेको छ । सुशासनको माथापच्चीले नेपालको राजनीतिमा अर्को धतुरो रोपिएको छ । व्यक्तिको उदय पतनको सवाल होइन, विषबृक्ष रोपिएपछि त्यसले दिने फलले कति पुस्ता दुष्प्रभावित हुन्छ भन्ने अहं प्रश्न हो । यो भूमिलाई एउटा सार्वभौम बनाउने प्रयास कहिल्यै भएन् । बरु देशलाई रत्नपार्क बनाइयो । नेताहरु चटपटे व्यापारीजस्ता भए । अनि भारतलाई महानगरको पुलिसजस्तो बनाएर आफूमाथि उत्ताउलो शासन गराउने परिपाटी बसाइयो । देश सधैं भाँडमा गयो, नेता टाँडमा रमाएर बसे । सत्ता र प्रतिपक्षमा बस्दाका कम्युनिष्ट, काँग्रेस कुनै मानेमा अन्तर देखिएनन् ।
समग्रमा भुईंको लोभ गर्दा पटुकाको पनि गुमाउनुपर्ने अबको आमन्त्रित परिस्थिति हो । एकथरि भन्छन्– ‘अब विश्वयुद्ध भयो भने पानीका लागि हुन्छ ।’ तर नेपालमा न्यायका लागि अझै युद्धको खतरा टरेको छैन । न्याय मरेको देशमा अरु सवै संकल्प पाखण्ड शिवाय केही हुँदैन । त्यही भएर त हो नि हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा कानुन माकुराको जालभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन् ।
जहाँ साना अड्कन्छन, ठूला उम्कन्छन् । खलिल जिब्रानले भनेका छन्– ‘कुटिलता कहिलेकाहीँ मात्र सफल भएको छ । यो सधैं आत्मघाती सिद्ध भएको छ ।’ आखिर हिजो र आजको श्रृङ्खलामा भोलि टाँसिएर आउने हो । कुनै मान्यता भत्काउँदा त्यहाँ ठड्याउने आस्था तयार गर्न सकिएन भने त्यसले सधैं अन्धकार निम्त्याउँछ ।
जतिसुकै राम्रो सरकार बने पनि बाघले मृगको शिकार गर्न छोड्दैन । गाई मांसाहारी हुँदैन । लामखुट्टे टोकेर भाग्न छोड्दैन । पशुपतिको बाँदरले भक्तले बोकेको केरा थुत्नबाट सन्यास लिँदैन । सूर्य उत्तरबाट उदाएर दक्षिणमा अस्ताउने पनि होइन । नेपालको भूगोल तन्किने, खुम्चिने प्रश्नै रहेन । सेनाको व्यारेक सरेजस्तो जनता साटिने पनि होइन । छिमेकी र सन्तान फेरिने होइन । अनि नचाहिँदा कोकोहोलोको के अर्थ ? पानी जतिसुकै तरल भएपनि त्यसको शोभा चट्टानसंग भएजस्तै नेताहरु जतिसुकै नालायक भए पनि तिनीहरुको साइनो लोकतन्त्रसँगै सुहाउँछ । कहिल्यै नभुलौं– ‘सत्यभन्दा संग्रहयोग्य अर्को वस्तु छैन् । यो घुमाउरो बाटो हिँड्दैन् ।’
हामीले चामल फे¥यौं, चरित्र फेरेनौं । शिक्षक फे¥यौं, किताब उही रट्यौं । टेबल फेरियो, खानेकुराको मेन्यू उही रह्यो । रंगविरंगी बोतल फेरिए, रक्सीको पुरानै स्वादमा जीब्रो रमायो । समय र भूगोलअनुसार माक्र्सवाद फेरियो, माक्र्सवादीको फेरिने चाह नै रहेन । संसदको कुर्सी फेरियो, कार्यशैली फेरिएन । यति मात्र कहाँ हो र ? मन्त्री, प्रधानमन्त्री, प्रशासक फेरिए, दाम चढाए खुसी हुने शैली झन्झन् बलबान हुँदै गयो ।
जतिसुकै राम्रो सरकार बने पनि बाघले मृगको शिकार गर्न छोड्दैन । गाई मांसाहारी हुँदैन । लामखुट्टे टोकेर भाग्न छोड्दैन । पशुपतिको बाँदरले भक्तले बोकेको केरा थुत्नबाट सन्यास लिँदैन । सूर्य उत्तरबाट उदाएर दक्षिणमा अस्ताउने पनि होइन । नेपालको भूगोल तन्किने, खुम्चिने प्रश्नै रहेन । सेनाको व्यारेक सरेजस्तो जनता साटिने पनि होइन । छिमेकी र सन्तान फेरिने होइन । अनि नचाहिँदा कोकोहोलोको के अर्थ ?
यो कस्तो मुलुक होला, ज हाँ सरकारको एउटा मन्त्रीले ट्राफिक नियम पालना गरेको समाचार ‘हटकेक’ बन्छ । गल्ती हुनु प्राकृतिक, स्वीकार्नु संस्कृति र सुधार्नु प्रगति हो । तर सरकारमा गएपछि विधि विधान मान्नु भनेको अपमान भन्ने बुझाई खतरनाक हो । नेपालमा सबैभन्दा सजिलो र अनुत्तरदायी जागिर भनेको मन्त्री पद हो । यहाँ त त्यही सजिलो जागिर पनि बचाउन हम्मे पर्नेहरु त्यो पदमा आसिन छन् ।
प्रधानमन्त्रीको काम हैन, मुख बोलेर हैरान छ । काम गर्नुपर्ने कर्मचारीहरु सुतुरमुर्ग भैंm भूईंमा चुचो जोतेर बसेका छन् । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले आदेश दिए पुग्ने, सचिव, सहसचिवले रातो मसीले सदर लेखे जागिर पाक्ने, त्यसभन्दा मुनिकालाई ट्रेड युनियनका नाममा नेताका सल्लाहकार हुने विधि विधानले फुकाइदिएपछि काम गर्ने जनशक्ति कहाँबाट ल्याउने ? आदेश दिनेका तामेली कसले गर्ने ? अनि काम नभएको रनाहामा तिनै मुखिया, खरिदारको सल्लाहमा सचिव, सहसचिवको सरुवामा बहादुरीको उपलब्धी दशकौं देखि राजनीतिक परिवर्तनको मानक बन्ने गरेको छ । नेताजीहरुसंग अब दुईवटा विकल्प छन कि कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग गर्नुस नभए नेपाल देशको राज्य प्रणाली भंग गर्नुस । यस्ता द्वैध चरित्रले अब चल्दैन ।
देशका फ्रन्ट डेस्क यति नालायक भए कि टीभी कार्यक्रम चलाउने एउटा पत्रकारसंग मानिसको भीड थेगिनसक्नु भइसक्यो । रिपोर्टर्स क्लब, नेपाल सरकारको मन्त्रालयभन्दा प्रसिद्ध मानिन थालिसक्यो । निर्मला पन्तको काण्डपछि पुलिसको अनुसन्धान प्रक्रियामा कस्तो सुधार आयो ? गोरे सुनकाण्डपछि सुनको अवैध व्यापार रोक्न कस्ता संयन्त्र अपनाइँदैछ ?
हजारे भ्रष्टाचारीलाई त अख्तियारले छिर्के लाउला तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै मिलाएर नीतिगत प्रसाद ज्यूनार गर्नेहरुको ओखती सरकारसंग के छ ? बदमास पक्रने कानुनको एउटा प्वाल तर निस्कने ध्वजापताका सहितका द्वार बन्द गराउन सरकारसंग जाँगर कति छ ? सरकारी कार्यक्रममा भन्दा प्रोजेक्ट म्यानेजरसंग सरकारका मुखियाहरुको उठबस ज्यादा देखिन्छ । मार्सी चामल, कथित शान्ति सम्मेलन यसैका बाछिटा हुन् । जनताको नाम लिएर सरकारलाई कर्पोरेट हाउस बनाउनु सरासर अपराध हो ।
अहिले यस्तो बेथिति छ, जसले जीवनमा एउटा सिंगो किताव उधिनेर पढेको रेकर्ड छैन, त्यसको बैठक पुस्तकको चाङले भरिएको देखिन्छ । पशुपतिमा सिंगो मोहोर नचढाएकाहरुलाई त्यहाँको पारदर्शिताको हिसावले भतभती पोल्छ । हो, यी सवै दृश्यले भन्छ– हाम्रा लागि आवश्यकता कम, पाखण्ड ज्यादा महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ । हरेकलाई आफ्नो कर्म र कर्तव्य साँघुरो बन्दैछ । न धर्म, न कर्म, न शर्मको पराकाष्टाले गिजोलिएको छ ।
जो जे मा योग्य छ, त्यसलाई विपरीत काम दिइन्छ । योग्यले पायो भने पनि सबभन्दा पहिले उसको रुचि सिण्डिकेट चलाउनेमा हुन्छ । कलम चलाउनेहरु कलम चलाउने बाहेकका काममा योग्य भए भने त्यो अपराध हो । डाक्टरहरुको अग्निपरीक्षा विरामीको अनुहारले गर्छ । ३ करोड जनताको भविष्य निर्धारण गर्न नसक्ने नालायकहरु राजनीतिक डाक्टर हुन खोज्दा नेताहरुले खानुपरेको सत्तोसराप जगजाहेर नै छ ।
एउटा भकुण्डो हात पार्न २२, २२ जना झुत्ति खेलेको पीडा खेप्न नसकेर प्रत्येकलाई एक एक वटा भकुण्डो किनिदिने उद्घोष गरेको भन्दै पुराना मन्त्री ध्यानबहादुर राईलाई उडायौं । टेलिफोनको रिसिभर उठाएर उताबाट गरिएको नमस्ते फर्काउन दुई हात जोड्दा टेलिफोन फुटाएको भनेर धनशेर राईलाई जोकर बनायौं । अंग्रेजी नजानेका जोगमेहरले गाडीको दुईतिर लेखिएको फेरि भेटौंलाको अंग्रेजी अनुवाद हर्न प्लिज भन्दै विदेशीसँग विदा मागेको किस्सा बनाइयो । आखिर त्यो समयको वितेको दशकौं पछि पनि त्यस अवस्थाबाट हाम्रा दैनिकीहरु एक पाइला अघि बढेका छैनन् ।
मान्छेको कमजोरीमा खेल्नेहरुले ३६ वर्षमा तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री , अनिरुद्ध प्रसाद सिंह ३४ वर्षमा प्रधानन्यायाधीश, भरतमणि शर्मा २३ वर्षमा मन्त्री, ३१ वर्षको उमेरमो हिमालय शम्शेर राणा राष्ट्र बैंकको गभर्नर, भेषबहादुर थापा २५ वर्षमा सचिव, ३१ वर्षको उमेरमा अमेरिकाको राजदूत बन्ने हैसियत बनाएका हृषिकेश शाहको पदचाप किन पछ्याउन सक्दैनन् ? संसारको नेतृत्व दुई बीस नकट्दै लिने परम्परा विपरित ६० वर्ष नाघेपछि दलहरुमा राजनीतिको खाता खोल्ने परिपाटी कहाँबाट आयो ?
राजनीतिलाई मनपरीको लिगबाट समाधानको बाटोमा ल्याउने एकमात्र निर्विकल्प शूत्र न्यायालय हो । यसमा खिया लाग्यो भने राजनीतिको धुर्वे हात्तीले जतिबेला जसको बाली पनि विमाख गर्न सक्छ । निरंकुशता लादेर देशमा ‘रणचण्डी’ को उपाधि धारण गरेकी इन्दिरा गान्धीलाई भारतीय सर्वोच्च न्यायालयका तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश वीआर कृष्ण अयरको फैसलाले चुरीफुरी सिध्याइ दियो ।
आफूलाई सर्वशक्तिमान बनाएकी गान्धीको संकटकाल विरुद्ध अयरले ऐतिहासिक फैसला गरेर भारतलाई २१ महिने स्वेच्छाचारी निरंकुशताबाट मुक्त बनाए । उनले संकटकाल विरुद्धको फैसलामा भनेका छन्– ‘आपतकाल जम्माजम्मी शासनको स्वेच्छाचारिता रहेछ । यो वर्वर निरंकुशतालाई शीघ्र र सामूहिक रुपमा सामना गरिएन भने यसको घातक प्रभुत्व झन् बढ्नेछ । र हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा निहित धेरथोर प्रतिकार क्षमता पनि यसको विषाक्त प्रभावबाट नष्ट हुनेछ । यसलाई समयमै निषेध गर्न सकिएन भने यसले विविध व्यवस्थालाई नै ध्वस्त गर्ने राजकीय आतंकवादीको रुप लिनेछ ।’
यो नैतिकता र साहस प्रदर्शन गर्ने हाम्रो न्यायक्षेत्र आफै कलंकित छ । लाग्छ, समाजका हरेक तह र तप्काका मानिसहरु पत्रिकामा निस्किएका वर्गीकृत विज्ञापनजस्ता भएका छन् । जमिनको लेनदेन घटेपनि मानिसका किनबेच अपत्यारिलोसंग फस्टाएको छ । जीवनभर बर्दी र विलासी जीवन धारण गरेकाहरु यतिबेला नवक्रान्तिकारी बनेर सर्पको मुखमा परेको भ्यागुतोले छिचिमिराको लोभ गरेजस्तै पदको आशक्तिमा मुख बाइरहेका छन् । उनीहरु सेवाभन्दा पनि प्रतिशोधको आगो झोस्ने योजनामा रहेको बुझ्न कठिन छैन् ।
७ कक्षा पढिरहेको छोरोलाई अचानक अनौठो रोग लागेपछि सबै गुमाएकी मन्जुको सहयोगका लागि अपील
पहिरोले गाउँपालिका कार्यालयसँगै तीन घर र एक महिलालाई पुर्यो